Spotify dia afaka mahazo tombony voalohany amin'ny 2017 | Vaovao IPhone
Spotify dia afaka mahazo tombony voalohany amin'ny 2017
Io Spotify io dia ny mpitarika tsy azo iadian-kevitra eo amin'ny tsenan'ny mozika mivantana dia zavatra iray izay tsy sahy hisalasala isika. Na izany aza, rehefa misisika ny hanolotra serivisy tsy ahazoana tombony mihintsy ny orinasa iray, dia rehefa manomboka misalasala ny amin'ireo fotokevitra mitarika rafitra iray isika. Ny zava-misy dia niaraka tamintsika nandritra ny taona maro i Spotify, na izany aza, na dia maro aza no tsy mahalala an'io, dia mbola tsy nahavita nahazo tombony tamin'ny famandrihana ny serivisiny. Etsy ankilany, Mety hiova ny zava-drehetra amin'ny 2017, satria antenaina fa sambany izy ireo no hahazo tombony ara-toekarena amin'ny asany.
PJ. Parson, iray amin'ireo mpamatsy vola voalohany an'ny Spotify, dia niaiky izany Reuters matoky fa Spotify dia hahazo tombony voalohany amin'ny tantarany amin'ny 2017. Ny ankamaroan'ny trosa dia ny hoe nanitatra an'i Japon izy ireo ary mikasa ny ho tonga any Chine, Russia ary Korea Atsimo. afaka volana vitsivitsy.
Hatreto isika dia nitombo sy nitombo. Angamba, ny tombom-barotra amin'ny rafitra dia manomboka laharam-pahamehana manomboka izao. Amin'ny maha mpamatsy vola antsika dia niasa tamin'ny fandefasana tolotra ho an'ny daholobe izahay amin'ny fotoana manaraka.
Amin'izao fotoana izao, hiezaka hanatsara ny tombom-barotra azon'ilay orinasa izahay rehefa mihalehibe. Mahery vaika ny rafitra ara-bola eto aminay.
Nalefa tamin'ny 2008, nivelatra ity sehatra mozika ity, fitantanana mba ho eo amin'ny tsena enimpolo samy hafa, ka mahatratra mihoatra ny mpampiasa efapolo tapitrisa mandoa vola. Apple Music, etsy ankilany, dia misy any amin'ny firenena 115, miaraka amin'ny kaonty fandoavam-bola 17 tapitrisa.
Amin'ny lafiny ara-bola, Very vola 145 tapitrisa dolara i Spotify tamin'ny taon-dasaEny, tsy dia kely izy io, saingy latsaky ny 165 tapitrisa tamin'ny taona 2014. Ary orinasa lehibe izy io, misy mpiasa maherin'ny 2.000 eran'izao tontolo izao. Na dia mihalava aza ny zava-misy fa manalava ny fotoana izy ireo dia mihetsika hatrany ny hetsika iray izay tsy mitsahatra manome fatiantoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Spotify dia afaka mahazo tombony voalohany amin'ny 2017
Apple dia namoaka ny iOS 10.2 Beta 5 ho an'ny Developers sy ny Public Beta
99% ny charger sandoka dia atahorana ho an'ny fitaovana Apple